च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल – रोमाको घरेलु मैदानमा लिभरपुलले अग्रता जोगाउला ? | Hamro Khelkud
च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल – रोमाको घरेलु मैदानमा लिभरपुलले अग्रता जोगाउला ?
बुधबार, वैशाख १९, २०७५
रोम (एजेन्सी) – बार्सिलोनाविरुद्ध क्वाटर फाइनलको दोस्रो लेगमा ४-१ ले पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै रोमाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यसपटक पनि फाइनलमा स्थान बनाउन रोमाले घरेलु मैदानमा त्यस्तै नतिजा निकाल्नु पर्नेछ।
पहिलो लेगमा लिभरपुलको घरेलु मैदानमा रोमा ५-२ ले पछि पर्यो। खेलको पहिलो २० मिनेट नियन्त्रणमा राखेपनि ५-० ले पछि परेको अवस्थामा लिभरपुललाई २ गोल फर्काउँदै रोमाले सेमिफाइनलको रोमाञ्चलाई जीवित राखेको थियो।
लिभरपुललाई भने यस खेलमा बार्सिलोनाको १८ वर्ष पुर्यानो कीर्तिमान तोड्ने अवसर छ। यो सिजन प्रतियोगितामा ४४ गोल गर्दै सर्वाधिक गोल गर्ने टोलीको रुपमा स्थापित लिभरपुललाई एकै सिजनमा सर्वाधिक गोल गर्ने टोली बन्ने अवसर छ। यसअघि बार्सिलोनाले १९९९ /२००० मा ४५ गोल गरेको थियो।
रोमाका प्रशिक्षक डी फ्रान्सिस्कोले खेलमा पुनरागमन गर्न हरसंभव प्रयास गर्ने बताए। खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामीले सक्छौ भन्ने विश्वास लिएर खेल्नेछौं। घरेलु समर्थकसामु हामी अर्को जादुको प्रतीक्षामा छौं। “
त्यस्तै लिभरपुलका प्रशिक्ष यर्गन क्लप पनि खेल जित्नेमा सकारात्मक छन्, “हामी सपना साकार पार्ने लडाईमा छौं”, उनले भने, “हामी एक बलियो टोलीको सामना गर्दैछौं, त्यसैले हामीले साहसीपूर्ण खेल्न जरुरि छ।”